China Cement akpa emepụta nyochaa kpọmkwem arụmọrụ nke nkịtị e ji mara nke plastic kpara akpa emepụta na suppliers | Jintang
1, obere ibu
Plastics na-adịkarị ọkụ, na njupụta nke plastic braid bụ ihe dịka 0, 9-0, 98 g / cm3. A na-ejikarị eriri polypropylene eme ihe. Ọ bụrụ na agbakwunyeghị nzacha, ọ hà njupụta nke polypropylene. Njupụta nke polypropylene maka ngwa ịkpa akwa plastik bụ 0, 9-0, gram 91 kwa cubic centimita. Braids na-adịkarị mfe karịa mmiri. The elu agbasa ike plastic braid bụ ụdị mgbanwe na elu na-agbasa ike ihe onwunwe na plastic ngwaahịa, nke metụtara ya molekụla Ọdịdị, crystallinity, na ịbịaru nghazi. O jikọtara ya na ụdị nke mgbakwunye. Ọ bụrụ na ejiri ike a kapịrị ọnụ (ike / ike ndọda) iji tụọ eriri ahụ rọba, ọ dị elu karịa ma ọ bụ dị nso na ngwongwo ọla ma nwee ezigbo nguzogide kemịkal.
2, plastic braid vesos inorganic
Organic ihe nwere ezigbo nguzogide corrosion n'okpuru 110 Celsius na enweghị mmetụta na ya ogologo oge. O nwere nkwusi siri ike nke kemịkalụ na ihe mgbaze, griiz, wdg. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu, carbon tetrachloride, xylene, turpentine, wdg. Fuming nitric acid, fuming sulfuric acid, halogen element na ndị ọzọ siri ike oxides ga oxidize ya, ọ nwere ezigbo corrosion eguzogide ike alkalis na general acids.
3, ezigbo nguzogide abrasion
Ọnụ nke esemokwu n'etiti polypropylene plastic braid dị obere, naanị ihe dịka 0 ma ọ bụ 12, nke yiri naịlọn. Ruo n'ókè ụfọdụ, esemokwu dị n'etiti braid plastic na ihe ndị ọzọ nwere mmetụta mmanu.
4, ezigbo ihe mkpuchi eletrik
Ngwunye polypropylene dị ọcha bụ ezigbo insulator eletriki. Ebe ọ bụ na ọ naghị amịrị mmiri ma iru mmiri dị na ikuku anaghị emetụta ya, voltaji na-agbawa dịkwa elu. Ya dielectric mgbe niile bụ 2, 2-2, na olu ya na-eguzogide dị nnọọ elu. Ihe mkpuchi dị mma nke braiding plastic apụtaghị iji ya maka mmepụta. Iji ihe na-egbochi ihe.
5. Nguzogide gburugburu ebe obibi
N’ụlọ dị elu, akwa a na-eji plastik emepụtaghị kpamkpam site na mbuze mmiri, ọnụọgụ mmiri nke dị n’ime awa 24 erughị 0, 01%, na ịbanye mmiri na-adị oke ala. Na obere okpomọkụ, ọ na-aghọ nke na-emebi emebi ma na-emebi emebi. Agaghị akpụcha plastik.
6. Adighi ike kara nká
Nguzogide nká nke plastic braid dara ogbenye, karịsịa polyidropylene braid dị ala karịa polyethylene braid. Isi ihe mere o ji mee nká bụ ikpo nkụ na photodegradation. Ike adịghị ike ịka nká nke plastic braid bụ otu n'ime adịghị ike ya, nke na-emetụta ndụ ọrụ ya yana mpaghara itinye ya n'ọrụ.
Post oge: Jan-29-2021
Gbochie Bottom Valve Bag, P kpara akpa, Gbochie Bottom Valve Cement Packaging Bag, P ciment Block Bottom valvụ Bag, Pp ndepụta Bag, Bopp laminated akpa, Ngwa niile